Guangzhou Sanheng Information Technology Co., Ltd. Sorumwe munyika nounyanzvi mugadziri pamwe widest kuwanda aidhinda consumables uye hofisi supplies, isu kudada zvikuru paakasika kupfuura nzira itsva uye dzichipfekeka zvigadzirwa. Office vanodei zvakawanda uye tinosungirwa Rokusangana vose.
TIANSE Nde muchiso mahofisi zvokuyamura pasi pomureza pamusoro Guangzhou Sanheng Information Technology Co., Ltd. It ine mutengo-kushanda, itsva design, vapfumi mavara uye siyana sarudzo. TIANSE muchiso anenge pamutemo apinda musika kubvira 2014, kushandisa hofisi kudhinda consumables, izvo akanotengesa pamusoro Tmall.com, JD.com uye mamwe e-zvokutengeserana platforms. It yava chinhu vaifarira kudhinda consumables nokutengesa muchiso mudzimai e-zvokutengeserana musika.
With firimu chawo akafukidza 35,000 mativi metres Huizhou, dzokuchengetera makuru mashanu China ne zvachose yokuchengetera zvinhu nzvimbo kusvika 10,000 mativi metres, 193 nyanzvi vatengi nzvimbo uye anopfuura 2300 pamwe nehoro munyika, kambani anogona kuvimbisa kutsanya uye nguva hurukuro uye kupa vatengi vane nyanzvi uye hanya pashure-okutengesa basa, zvechokwadi kuziva chimwe-kumira basa.
With mupfumi indasitiri ruzivo uye kunyatsoomerera yepamusoro kudzora muitiro, isu pfungwa pane zvatinoita uye kuti mhiko yakasimba kuitira vatengi vedu chete kugamuchira chemhando yepamusoro zvigadzirwa.
With yakadzikama PAKAPERA ngetani, mutengi vaifarira pfungwa uye nyanzvi chikwata vatengi, isu kupa zvose-kumativi uye aifungawo pre-sale, mu-sale uye pashure-sale mabasa vatengi dzedu dzose nguva.